PressReader - Isolezwe: 2018-07-12 - Kukhishwe irayisi kusolwa iListeria
Kukhishwe irayisi kusolwa iListeria
Isolezwe - 2018-07-12 - IZINDABA - LUNGI LANGA
ISITOLO sokudla sakuleli kwaWoolworths sesikhiphe emashalofini aso irayisi elihlala emafrijini ngoba kube nezinsolo zokutholakala kwegciwane ilisteria emazweni ase-Europe.
Esitatimendeni esikhishwe abakwaWoolworths baveze ukuthi bakhiphe leli rayisi ngoba bekuthathela phezulu ukuthi ukudla abakudayisayo kuseqophelweni eliphezulu.
Bathe ukususwa kwaleli rayisi kulandela ukukhishwa komyalelo wokuthi likhishwe yinhlangano engamele ukuqinisekiswa kokuphepha kokudla, iHungarian Food and Safety Agency. Uhlobo lwerayisi elikhishwe emashalofini laziwa nge-Frozen Savoury Rice Mix. Lo mkhiqizo kuthiwa uthathwe eBelgium, unommbila onoshukela otholakale efemini iGreenyard, eHungary. Le femu isolwa ngokuthinteka ekusabalaleni kwelisteria e-Europe.
Ngokusho kwabakwaWoolworths leli rayisi lisuke lingakaphekwa futhi lihlala efrijini elineqhwa. Lidinga ukuphekisiswa ngaphambi kokuthi lidliwe.
Ngokusho kwezazi zezifo igciwane ilisteria liyafa uma ukudla kuphekwe ngokufanele.
Lesi sitolo sithe silikhipha emashalofini leli rayisi ngokwaso asiphoqiwe ngoba silandela umyalelo okhishwe phesheya.
Sithe eminye imikhiqizo yabo yombila noma eyimifino ehlala emafrijini aneqhwa ayithinteki kulokhu.
“Nalo mkhiqizo uhloliwe njengohlelo lokuhlola watholakala ungenagcobho.
Sinxusa amakhasimende asethenge lo mkhiqizo ukuthi bawubuyise ezitolo bese bethola imali yabo ephelele. Uma befuna ukuthola kabanzi bangathinta uphiko olulalela izikhalazo zamakhasimende ku: 0860 022 002 noma bavakashele i-website yabo ku: woolworths.co.za,” kusho isitatimende.
ENingizimu Afrika kube nengebhe ngemuva kokusabalala kwesifo esidalwa abantu abashona ngenxa yelisteriosis okuyisifo esidalwa yileli gciwane kuleli okukholakala ukuthi kwakuthinteka inkampani ekhiqiza ukudla i-Enterprise ngokusabalala kwelisteria. Ngokwenhlangano ebhekele ukuphenya ngezifo ezithelelanayo kuleli, iNational Institute for Communicable Diseases (NICD), zilinganiselwa ku 1 053 izigameko zelisteria ezahlolwa zaqinisekiswa ezikhungweni zokuhlola uketshezi kusuka ngoJanuwari nyakenye kuze kube nguJanuwari nonyaka.